Amadoda amadala kunye nokunyanga kwamabala | Amadoda aQinisekileyo
Amabala ahlala enxulunyaniswa nokufikisa, kodwa amadoda amaninzi akhulileyo aqhubeka esilwa ngqolowa ngasemva kunye namanye amalungu omzimba anamashumi amabini, anamashumi amathathu kwaye nasemva kweminyaka engama-40. Kuqikelelwa ukuba zimele malunga neepesenti ezingama-25.
Zintathu izinto ezibangela indumba: amadlala asebaceous asebenza kakhulu, iifollic zeenwele ezifakiweyo (iiseli ezifileyo, i-sebum), kunye nobukho bentsholongwane kwistollicle uqobo. Kusengqiqweni ke ngoko ukuba zithini iingcali ukunyanga amabala kuya kufuneka ufunde ukuphatha ngcono ulusu lwemveliso yesebum.
Xa une-acne, kukho isilingo sokuhlamba ubuso bakho ngesepha eqatha kwimarike, ukuze isincede sisuse yonke i-sebum. Nangona kunjalo, oku kuyakwenza kuphela ukuba ulusu luqale ukuvelisa i-sebum ngakumbi ukwenza ilahleko. Endaweni yoko, ukubheja kwimveliso enefomula ethambileyo engacaphukisi ulusu lwakho kwaye uyisebenzise kabini ngemini ukuhlamba ubuso bakho.
Ukuphuma amaqhakuva ngamanye amaxesha kuyasebenzaKodwa ihlala ivumela ubovu kunye neebhaktheriya ukuba zisasaze kwizicubu ezijikelezileyo, apho kunokubangela amaqhakuva amaninzi. Ungasathethi ke ngezikrelemnqa ezinokushiyeka ukuba ibhokhwe inobungakanani obukhulu. Ke zama ukugcina iminwe yakho ingabikho ebusweni bakho kwaye inkqubo mayithathe ikhosi.
Ioyile yomthi weti
Unyango lweSpot lunokusebenza kakhulu ukuba zikumgangatho kwaye zisetyenziswe ngokuchanekileyo. Qinisekisa ukuba ziqukethe i-benzoyl peroxide, isithako esimangalisayo xa kufikwa ekugcineni amaqhakuva phantsi kolawulo. Ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe zi-salicylic acid kunye neoyile yomthi weti, enokuthengwa ngokukodwa (ungayibona kule migca). Kwaye khumbula: sukucinga ukuba ngekhe ukwazi ukwenza ngaphandle kwemveliso ekuthethwa ngayo. Isitshixo kukusebenzisa kancinci nangaphantsi kwekhosi ubuncinci iiveki ezimbini ude uyisuse ngokupheleleyo kwinkqubo yakho yokuzilungisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Iingcebiso zokubetha induna xa umdala